वेस्टल्याण्ड - पुरुष र महिलाहरु को लागि जीन्स: मोडेल, तस्वीरहरु, समीक्षाहरु
उच्च-गुणस्तर र साथसाथै सुन्दर कपडाहरूको सबै प्रशंसकहरू, निस्सन्देह, के थाहा छ कि वेस्टल्याण्ड क्या हो। यो जीन्सहरू संसारभरै फैलिएको छ जसलाई फ्रेड connoisseurs भनिन्छ। सन् 1930 मा भाइरल एडम्सले सानो सिलाई कार्यशाला खोल्यो। यसले काम गर्ने कपडा उत्पादन गर्यो। यसलाई प्रयोग गर्नको लागि मध्य कक्षाबाट तुरुन्तै एकदम माग भयो। तथ्य यो हो कि यसको उत्पादनको लागि प्राकृतिक र बलियो कपास कपडा प्रयोग गरिएको थियो। बीस वर्ष पछि, कम्पनी "बदल्यो" वेस्टल्याण्डमा। जीन्स धेरै चाँडै प्रशंसकहरू प्राप्त गर्थे। र यो आश्चर्यचकित छैन।
वेस्टल्याण्ड - हरेक स्वादको लागि जीन्स
तथापि, कम्पनीले प्रारम्भिक नेनिनेटहरूमा विशेष प्रसिद्धि प्राप्त गर्यो। ओठमा धेरै व्यक्तिले वेस्टल्याण्डको नाउँमा लगाइदिए। जीन्स, तथापि, सबैलाई बर्दाश्त गर्न सकेन। आज सम्म, निस्सन्देह, सबै कुरा धेरै सरल छ। एक वर्ष दुई पटक यस ब्रान्डका डिजाइनरहरूले आफ्ना फ्यानहरूलाई अलमारी अद्यावधिक गर्न प्रस्ताव गर्छन्।
यी जीन्सहरू खरिद गरेर, तपाईं आफैले उच्च र कम कमिस्ट दुवैसँग एक मोडेल चयन गर्न सक्नुहुन्छ; युवा र क्लासिक कटौती दुवै; मानक र रचनात्मक रंग दुवै। यी चीजहरू विभिन्न उमेर कोटीहरूको खरिदहरूको मागमा छन्। र, शैली को बावजूद, उनि सधै सामरिक र स्टाइलिश दिखते हो। तपाईं तिनीहरूलाई अलग अलमारी विकल्पहरूसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। यस कारणको लागि, यी मोडेलहरू सधैँ मागमा छन्।
विभिन्न प्रकारका लुगाहरू
त्यसोभए, नियमित रूपमा डिजाइनरहरू वेस्टल्याण्डको नयाँ संग्रह सिर्जना गर्छन्। जीन्स, रास्ते, यो कम्पनी द्वारा पेश गरिएको एकमात्र कपडा होइन। फैशनेबल पतलूनमा तपाई सधैँ एक जैकेट, जम्पर वा अन्य स्टाइलिश सहायक चयन गर्न सक्नुहुनेछ।
जीन्सहरू कपडाहरूमा तपाईंले रात क्लबको यात्राको लागि युवा संगठन चयन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ उत्सवका लागि चीजहरू पनि छन्। यस कपडाको अनावश्यक लाभ यो लगभग कुनै पनि उचाइ र कुनै आकारमा सिलाईएको छ। कुनै पनि मामला मा, तपाईं अद्भुत चीजहरु कि बस निष्पक्ष बैठ मा खरीद गर्न सक्छन्। त्यसो भए उनीहरुका साथीहरुसँग भेटघाट गरेकी छिन्।
र रूसको बारेमा के? यहाँ, 1 994मा ग्राहकहरु लाई प्रस्तुत पुरुष र महिलाहरु को लागि वेस्टल्याण्ड जीन्स। यसको स्थापना पछि देखि यसको मुख्य मार्केटिंग कार्य व्यापक वितरण नेटवर्क को निर्माण भएको छ। निस्सन्देह, समय भन्दा माथि, कम्पनीले रूसमा रिटेलको विकास गर्न आवश्यक छ। आज सम्म, यो डेनिम कपडाको ब्रान्डेड भण्डारको नेटवर्क बिक्रीको एक सय भन्दा बढी र सत्तर अंक छ।
ब्रान्ड को सफलता, बेशक, मूल्य र गुणवत्ता को आदर्श अनुपात को कारण हो। लागत, साँच्चै, मध्यम छ। गुणस्तर उच्च छ। कम्पनीको वित्तीय स्थायित्व ठूलो मात्रा मा बिक्री, संतुलित वर्गीकरण नीति, ग्राहक प्रोत्साहन को क्लब प्रणाली र नयाँ संग्रह सिर्जना गर्दा बजार को फैशन प्रवृत्तहरुको निरंतर विचार सावधान विश्लेषण मा निर्भर गर्दछ। र एक सफलता को एक अधिक घटक एक खरीदार को रूप मा अमेरिकी क्लासिक जीन्स को रुचि को ओर अभिमुखीकरण मा छ। यी मोडेलहरू अझै पनि सबै समयका लागी कपडाहरू छन्।
सामान्यतया, वेस्टल्याण्ड - महिलाहरु र पुरुषहरु को जीन्स, धेरै प्रशंसकहरु को मान्यता प्राप्त। डिजाइनको क्षेत्रमा आफ्नो आधुनिक घटनाक्रम र लामो-फरक परम्परागत धन्यवाद, कम्पनीले आफैले फैशन बजारमा एक लोकप्रिय कपडा ब्रान्डको रूपमा स्थापित गरेको छ, काजोल्युलमा बनाइएको छ। जवान र आत्म-भरोसा मानिसहरू यस्ता मोडेलहरू प्राप्त गर्न खुसी छन्।
सङ्कलन गर्न संग्रहबाट, डिजाइनरहरू आधुनिक कपडाहरूबाट बनेका विभिन्न जीन्सहरूसँग प्रस्तुत हुन्छन्। उनीहरूको लागि धन्यवाद तपाई धेरै रोचक तस्बिरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाई आफैंलाई फैशनको केन्द्रमा महसुस गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
वैसे, संग्रहमा "प्लस" आकारका धेरै मोडेलहरू छन्। त्यसैले यसैले पूर्ण व्यक्तिले आफुलाई यो कपडामा स्वतन्त्र र सजिलो महसुस गर्न सक्दछन्। एउटा शब्दमा, वेस्टल्याण्डले तपाईंलाई के चाहिन्छ भनेर जान्दछ, तपाईंको अलमारीको लागि साँच्चै आरामदायक र स्टाइलिश चीजहरू प्रदान गर्दछ। राम्रो, किफायती मूल्यहरूले तपाईंलाई खरिद गर्न अनुमति दिन्छ न केवल सुखद, तर पनि लाभदायक। हरेक व्यक्तिलाई उनीहरूको उपस्थितिमा ध्यान दिन्छन् जुन यस्ता जीन्सहरू जस्तै हुनेछन्। तपाईले निश्चित रूपमा केहि आफैंलाई रोचक बनाउन सक्नुहुन्छ।
क्लासिक जीन्स र आकस्मिक पहना
सिद्धान्तमा, वेस्टल्याण्ड एक कम्पनी हो जसले क्लासिकको रचनाकारहरूको रूपमा फैशनको इतिहासमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। तथापि, आज यो पनि आकस्मिक पहेलो छ। यो भुक्तानीको लायक छ, उदाहरणको लागि, पुरुषहरूको जीन्सहरूलाई उनीहरूको ध्यान पश्चिमील्याण्ड 5521 नीलो।
एक सुखद रहने को लागी तस्वीर कपडे र सक्रिय जीवन निश्चित रूप देखि तपाईंलाई उपयुक्त हुनेछ। नयाँ जीन पतलूनका लागि प्रत्येक सङ्कलनमा तपाईं जैकेट, जर्सी, टी-शर्ट र शर्टहरूको साथमा उत्कृष्ट संयोजन चयन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं चमडा पट्टाहरू, थलो र टोपीहरूसँग छवि सजिलैसँग पूरै गर्न सक्नुहुनेछ।
फैशनेबल रङ दायरा, सामरिक प्रिंट र प्राकृतिक सामग्रीको लागि धन्यबाद, वेस्टल्याण्डलाई अनावश्यक छैन। र जीन्स जस्तै र ती व्यक्ति जसले प्रकृतिको सौंदर्यशास्त्रको साथ आफ्नो जीवनलाई जोड दिएका छन् र जो शहरको गतिशीलता रोज्छन्।
आफ्नो ग्राहकहरु को हेरचाह दृष्टिकोण
स्वाभाविक रूप देखि, यदि उत्पादन यसको गुणवत्ता र सुंदरता को लागि नहीं, त धेरै प्रशंसकहरु हुनेछ। किनकि वेस्टल्याण्डले जीन्सको बारेमा समीक्षा गर्नु राम्रो छ। दिईएको ब्रान्डले आफैलाई सावधान सावधानी वा प्रत्येक खरिदको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा साबित गरेको छ। लचीला डिस्काउंट प्रणाली, नियमित पदोन्नति र अन्य सुखद चिन्तनले तपाईंलाई यो सुन्दर कमाल संग यो सुन्दर कपडाहरूको आनन्द लिन अनुमति दिन्छ।
साइज दायराको बारेमा नबिर्सनुहोस्। महिला जीन्स आकार 40 देखि 56 सम्म सम्म पुरुषहरु को जीन्सहरु लाई प्रदान गर्दछ - 44 देखि 62 सम्म। जैकेट, शर्ट र शर्ट - महिलाहरु र एस देखि XXXXL सम्म पुरुषहरु को लागि XS देखि XXL सम्म।
एडम्स भाइहरूले महिमा गरे
त्यसैले, आजको लागि यो फैशनेबल कपडा प्रसिद्ध छ र संसारभर धेरै मान्छेले माया गर्छ। यद्यपि यो अन्तिम शताब्दीका 30 मा शिकागोमा शुरु भएको थियो, जब भाइहरू डेभीड र वाल्टरले एक सानो कम्पनी खोल्यो। कपडाको विशाल लोकप्रियता धेरै चाँडै जित्यो, किनकि यो केवल सहज थिएन, तर राम्रोसँग पनि राम्रो। परास्नातक सामग्री को विशेष प्राकृतिक additives संग संसाधित। चीजहरू मूल कटसँग पनि खुसी छन्। यो कुनै पनि मौसममा तिनीहरूलाई सुविधाजनक थियो।
अमेरिका निर्माण भएको बेला भाइहरूको व्यवसाय पर्वतमा गए। एक सानो फर्म आरामदायक लुगाफाँट को लागि एक विशाल कारखाना मा बदल्यो। कहिलेकाहीँ, वेस्टल्याण्डले अमेरिकन सहज, गुणस्तर, निःशुल्क शैलीलाई सम्बोधन गर्छ। एक शब्दमा, एडम्स भाइहरूले साँच्चै आफ्नो कम्पनी विकास गर्न धेरै गरे।
दर्शन र शैली
संक्षेप गर्दै। ब्रान्ड को शैली को महत्त्वपूर्ण रूप देखि जंगली पश्चिम र एक आकर्षक पश्चिमी विषय को विषय मा प्रभावित भएको थियो। ब्रान्डेड पसलहरूको डिजाइनले पछिल्ला औद्योगिक अमेरिकालाई पूर्ण रूपमा देखाउँछ।
आज, यी लुगाहरू हाम्रो देशको लगभग सबै क्षेत्रमा खरिद गर्न सकिन्छ। केवल मस्कोमा वेस्टल्याण्डको पचास स्टोरहरू छन् । पुरुषहरु को लागि जीन्स 509नौसेना, 5521 नीला र अन्य मोडेल - यो सबै खरीददारों को लागि बिल्कुल सस्ती छ।
कम्पनीले व्यवसायको दृष्टिकोण, उच्च गुणस्तर र छनौटको स्वतन्त्रताको संयोजन गर्ने प्रयास गर्दछ। र उनी सफलतापूर्वक सफल भए। वेस्टल्याण्ड ले लगातार ग्राहकहरु लाई बुना भयो कपडा र डेनिम देखि व्यावहारिक र आरामदायक कपडे को एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत गर्दछ जो मन मा सबै भन्दा नवीनतम फैशन प्रवृत्तहरु संग बनाइयो। ब्रान्ड दुवै महिला र पुरुष मोडेलहरूको लाइनहरू द्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको छ।
वेस्टल्याण्ड - कम्पनी धेरै लोकतांत्रिक छ। उच्च गुणस्तरमा, बिल्कुल किफायती मूल्यहरूले असर गर्दैन। यसको अतिरिक्त, यो फर्म समय परीक्षण छ। यसकारण, ब्रान्डसँग धेरै फाइदाहरू छन्।
ग्राहकमा फोकस गरिएको छ, जो उच्च गुणस्तरको प्राकृतिक सामग्री मनपर्छ, उनले मात्र यस्तो राम्रो पहिचान जितेको छैन। वेस्टल्याण्डमा खरीद गरिसकेपछि, तपाईं फैशनेबल, आरामदायक, स्टाइलिश र टिकाऊ कपडाहरू पाउनुहुनेछ।
सधैं फैशनेबल र आरामदायक - डेनिम स्कर्ट
डायना वोन Furstenberg: जीवनी, फोटो र रोचक तथ्यहरू
महिलाहरु को फैशन को गर्मी को जूता 2013
नाजुक शिफन, वा एक मनपर्ने स्कर्टलाई कसरी लियो?
तपाईंको जीन्सलाई फैलाउनु राम्रो लाग्यो?
शौचालय मा आराम: समीक्षा
Capricious सौन्दर्य - gloxinia। रोपण र हेरविचार।
Valmont प्रसाधन ( 'valmont') निर्माण को देश, समीक्षा। स्विस कस्मेटिक्स
लेकिमिया: लक्षण र दुःखी नतिजा
को "भेनस" जैक्स फ्रेस्को। "प्रमोदवनमा वा OBLIVION।" परियोजना "भेनस" को आलोचकहरु र यसको बारेमा समीक्षा
मा रूसी पीसी मा सिमुलेशन विमान: सूची। PC मा सबै भन्दा राम्रो विमान सिम्युलेटर
Icarus के हो? यो वस्तु वा व्यक्तिलाई?